Shirka Golaha Kabineetka Heer Deegaan Oo Furmay - Cakaara News
Shirka Golaha Kabineetka Heer Deegaan Oo Furmay
Jigjiga(CN) Isniin, 28ka September 2015, Shir ay isugu yimaadeen golaha kabineetka heer deegaan ayaa galabta kafurmay hoolka shirarka ee xafiiska madaxtooyada.
Furitaankii shirkan ayuu madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar usoo bandhigay kabineega qodobada shirka lagaga wada hadlayo oo kala ahaa: dhisida gudiga maamulaysa mashruuca SDG(SDG board), in wakaalada dhismaha hawlaha biyaha loo kala qaado laba wakaaladood oo siman IWM.
Kadib markii golaha kabineegu kadooday ajandayaasha shirkan ayaa wuxuu codbuuxa ku ansixiyey in gudiga mashruuca SDG maamulaysa noqdaan: fartuun cabdi mahdi oo gudoomiyaha gudiga loo doortay, suldaankhayre-gudoomiye kuxigeenka gudiga, cabdicasiis maxamed, deeq c/laahi, maajida maxamuud, axmed cabdi maxamed, cabdinuur axmed colaw, c/raxmaan maxamed xasan oo iyaguna xubno ka ah gudiga.
Hadaba waxaa shirkan lagu qeexay waajibaadka gudigan saaran oo ah: in awooda ugu saraysa uu gudigu iska leeyahay, ansixinta iyo dabagalka shaqooyinka iyo shaqaalaynta shirkadaha, qiimaynta qorshaha isticmaalka miisaaniyada, xalinta caqabadaha kahoryimaada shirkadaha IWM. waxaa intaa dheer, in gudigu 15kii cashaba qiimeeyo shirkadaha kadibna uu warbixintooda usoo gudbiyo xafiiska madaxtooyada DDSI.
Dhanka kalana wuxuu kabineegu codbuuxa ku ansixiyay in wakaalada dhismaha hawlaha biyaha loo kala qaado laba wakaaladood oo kala ah: wakaalada dhismaha biyaha iyo wakaalada qodida ceelasha mid walibana yeelato structure, miisaaniyad iyo waaxo ugooni ah.
Shirkan oo ilaa bari sii socon doona ayaan idinla soo socodsiin doonaa qodobada hadhay.